Fanondranana omby an-tsokosoko eto Madagasikara - Malina
AccueilVaovaoPolitikaFanondranana omby an-tsokosoko eto Madagasikara
PolitikaTrandraka by Malina
Rehefa niainga niaraka tamin’ny andiana zebus ny dahalo taorian’ny fanafihana dia tsy namela na inona na inona ho azy ireo izy ireo, satria eo an-tampon’izy ireo ny mpampihatra lalàna, tompon-trano ary fokonolona. Avy amin’ny làlana tsy maintsy alehan’izy ireo mankany amin’ny toerana kendrena hijanonana ireo biby eo am-piandrasana ny hamoahana azy ireo, amin’ny alàlan’ny fanamafisana, fiambenana ary fitaovam-piadiana, voaomana ny zava-drehetra. Rehefa midina ao amin’ny trano famonoana Anosizato na Akadindratombo ny zebus, dia voadio sy madio ary omena Takelaka Bovid (FIB) tsirairay izy ireo.
Izany rehetra izany dia mitaky tambajotra firaisana tsikombakomba amin’ny ambaratonga rehetra, eny an-kianja, fa ao amin’ny birao koa, ilay “Dahalo ambony latabatra” malaza, ireo bandy fotsy. “Hifarana ihany ny tranga dahalo rehefa esorina tsy misy hetsika ny dahalo ambony latabatra. Mangataka amin’ny fanjakana izahay mba hanao izany, ”hoy i Naivo Ramaroson, mpiandry zebu avy any Anjorozobe. Nahita sy nahita maso ny fahombiazan’ireny tambajotran-jiolahy ireny izy tamin’ny fanarahan-dalàna taorian’ny nahatratraran’ireo dahalo ny omby.
“Ny mponina ao Antananarivo dia mihinana betsaka ny henan’omby ara-dàlana”
Ny fijoroana vavolon’ny tompon’andraikitra ambony izay mangataka ny tsy hitonona anarana dia manohana ny famakafakana ilay mpiompy kely Anjozorobe. Ny zebus, rehefa tonga eto Antananarivo dia efa manana taratasy toy ny FIB sy pasipaoro milamina tsara. Ireo taratasin-kazo ireo dia vita amin’ny tambajotram-pifandraisana izay an’ny mpanohana izay manome iraka ny dahalo. Ireo izay midina an-tsaha dia mpanakanto tsotra. “Tena marani-tsaina izy ireo satria ny zebus tonga eny an-tsena dia efa voadio ary noho izany dia eo am-pivarotan-kena no tapitra ny fizotran’ny fanadiovana, ka izany no vitsy ny antontan’isa momba ny tena zava-misy amin’ny fifamoivoizana ao zebu,” hoy izy mitaraina. Izany no antony, raha oharina amin’ny faritra hafa, ny habetsaky ny fanondranana olona an-tsokosoko eto Analamanga dia zara raha 2% satria ny tena asa fanadiovana dia tsy natao tao amin’ity faritra ity. Etsy ankilany, any Analamanga no ahitantsika ny mpanelanelana betsaka indrindra. Ny ankamaroan’ny hena avy amin’ny sidina zebu dia miafara amin’ny vilany fandrahoan-tsakafon’ny mponin’Antananarivo izay mpanjifa hena lehibe indrindra eto Madagascar